Hery - Tsiky dia ampy | Izaho sy ny ahy | 13
Hiverina ni-facebook aho (tsy aferanao)
2010-10-12 @ 06:29 in Izaho sy ny ahy
Tamin'ny volana desambra 2009 aho no tena ni-facebook farany. Nandritra ny herinandro vitsivitsy taorian'io dia nandalo ni-desactiver ny emails sns fotsiny. Ary nanomboka tamin'ny Janvier 2010 tany dia tsy niditra facebook tanteraka intsony. Nazava tsara moa ny tanjona tamin'ireny dia ilay hoe handany andro hanao ny serasera.org tanteraka ary azo lazaina hoe tratra araka izay niheverana azy tamin'iny été iny. Tsy dia misy tena antony manokana hiverenako facebook amin'izao fotoana izao fa mahafinaritra fotsiny ilay hoe hiditra facebook indray. Fantatro rahateo fa tsy hisy hivaky loha na miditra aho na tsia lolll.
Inona izany ny tanjona?
- Mila manana "amis" mihoatra ny 5000 aho alohan'ny Paka 2011. Ampidiro amis-ko daholo ze bodo sy adala hitanareo rehetra fa tonga dia accepter-ko.
- Hasehoko an'i anona sy anona hoe tsy misakana hiserasera ny mampiasa facebook à fond lolll (Aza tezitra wa toi fa 100% io)
- Hasehoko an'i anona sy i anona ary i anona fa na dia namako ao amin'ny facebook aza izy dia tsy namako tena izy :-) (Sao de hoe bizou bizou eo fa rehefa gline de gline)
- Hitady kil amina produits vitsivitsy no tena tanjona kanefa tsisy hoe "Ajouter un client" ao ka dia tsy maintsy mody atao "amis" daholo ny bodo sy adala (Donc ami = client)
- Hahazo kil ve aho? Vitsy ny hamaky ity lahatsoratry ny blaogiko ity ka ny ankamaroany dia hieritreritra hoe tena akama daholo :-) (Zay le hoe tsy aferanao eo am titre)
- Ho an'ny namana tena namana :-). Aza miantehitra ny hifandray amiko ao amin'ny FB satria tsy ho hitako akory ny fifandraisana apetrakao ao. Ny email-ko sy ny tel-ko ihany ianteherana.
Zay izany fa dia hanomboka ny aventures.
Aparitaho ary ny anarako lolll Hery Serasera http://www.facebook.com/heriniaina
Video: Injany fa miantso ahy
2010-09-08 @ 00:11 in Izaho sy ny ahy
Tena tiako ilay hira dia nataoko na dia tsy ampy fitaovana sy ratsy feo aza. Nandany fotoana ihany ny nanao azy fa vao fanandramana voalohany.
Hira nalaina tao amin'ny Fihirana Hasina P. 595
Ny video dia nalaina tamin'ny fakan-tsary finepix s1000 (Fujifilm), tsotra kokoa
Ny mozika dia notendrena manontolo tamin'ny Behringer UMA25S. Ilay Yamaha PSR E323 nanarahana ny playback fotsiny.
Ny feo dia narindra tamin'ny Cubase 5 (Nampiasa Halione1 sy Groove tamin'ny drums)
Ny sary dia narindra tamin'ny KDEnlive 0.7.7.1 (tao anaty Linux ubuntu studio).
Ny micro izany no hitako tsy mamely... rehefa mba ratsy ny feo tokony azo amboamboarina amin'ny micro tsss.
«Mialoha 1 2 3 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 32 33 34 Manaraka»